क्षय के हो? विस्तृत विश्लेषण
यसै क्षय भनेर बताउँछन्। कि शब्द मतलब के र किन यो फेरि इन्टरनेट प्रयोग गर्न थाले, देखि दैनिक प्रयोग लगभग फिर्ता लिया छ छ?
बोलचाल भाषा परिवर्तन गर्न विषय हो, र उमेर आधारमा त्यहाँ, नयाँ शब्द र पुरानो हो त्यसको विपरीत, प्रयोग बाहिर परे। यो प्रक्रिया ट्रयाक राख्न गाह्रो छ, र कुनै एक तर वैज्ञानिकहरू छैन उसलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ छन्। हुनत हाल को वर्ष, संगठन र रूसी भाषा को शुद्धता, यो विदेशी भाषामा, शब्दजाल र कठबोली देखि कम ऋणबाट थियो कि एक प्रयास advocated गर्ने सार्वजनिक तथ्याङ्कले मा। तर, यो सफलता बदलिने संग, बाहिर जान्छ।
उदाहरणका लागि, तपाईं XVII शताब्दीमा हाम्रा पुर्खाहरूले द्वारा बोलिएको भाषा लिन भने, यो निकै आधुनिक भिन्न हुन्छ। यसलाई मा शब्द आम, कि मानिसहरू बुझ्दैनन्, हाम्रो दैनिक भाषा असम्भाव्य छ साथै पुर्खाहरूको बुझेका गर्न। अब एउटै शब्द केही किनभने पुरानो जमानाको को प्रयोग, तिनीहरूले अझ सरल र व्यावहारिक बदलिएको छन्। र तिनीहरूलाई एक - यो खरानी छ। तर क्षय के हो? र किन शब्द जवान मान्छे मन थाले रूपमा इन्टरनेट को आगमन संग? यो हामी बुझ्न पर्छ।
पहिले तपाईं शब्द मतलब भनेर बुझ्न आवश्यक छ। यस को लागि हामी शब्दकोश बारी। उहाँलाई अनुसार, दुई मान को शब्दमा। पहिलो क्षय मा - यो Rot, क्षय हुनु र क्षय प्रक्रिया। उदाहरणका लागि, वा "म भ्रष्टाचार फर्कन" "क्षय गर्न subjected।" दोस्रो एक लाक्षणिक अर्थमा प्रयोग गरिएको छ यो हो केहि महत्वहीन, नगण्य, नश्वर। यो पनि किनभने तपाईंले चिन्ता के गर्नुपर्छ वा मनमा को, महीना कागज कुरा अर्थहीन, जनाउँछ गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, वाक्यांश "सबै खरानी" तपाईं अस्तित्व वा चरम सुस्ती को meaninglessness जोड गर्न चाहनुहुन्छ जब प्रयोग भएको छ। यो क्षय क्रम मा, हामी बुझ्न, तर किन यो शब्द फेरि लोकप्रिय भएको छ?
मध्य र लेट 2000s मा, त्यहाँ युवा उपसभ्यताहरू धेरै थियो, वा मौलिक अवस्थित व्यक्तिहरूलाई परिवर्तन। र तिनीहरूलाई केही, म यति भन्न सक्छ भने, यो जफत भइरहेको छ, जो को जीवन, यसको कठोरता वा निरपेक्ष insignificance को transience, प्रचार तथ्यलाई छैन यो लायक छ, र यो भविष्यमा सोच्न कुनै अर्थमा बनाउँछ। आत्महत्या को प्रवृत्ति संग व्यक्ति बीच - "भ्रष्टाचार जीवन" र यो एक लोकप्रिय वाक्यांश भयो। यो के हो? यो प्रश्नको जवाफ धेरै सरल छ - त्यसैले तिनीहरू चरम थकान जीवन signified र के पार्थिव अस्तित्व मानिन्छ बिल्कुल अर्थहीन छ। विशेष गरी यस्ता भावनाहरु र goths रूपमा उपसभ्यताहरू प्रतिनिधिहरूलाई रुचाउनु ती।
बिस्तारै तथापि, अभिव्यक्ति coveted छ र युवाहरूलाई बाँकी, र यो चाँडै इन्टरनेट मेमे एक प्रकारको भयो।
के "संपर्क" मा खरानी छ?
रूस र पूर्व सोभियत संघ मा सबै भन्दा लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल "VKontakte" छ। बिस्तारै, त्यहाँ धेरै प्रयोगकर्ताहरू विषयगत समुदाय व्यापक ध्यान गरिएको छ, तर अझै पनि ती सबै भन्दा - मनोरञ्जन। कारण सामाजिक सञ्जाल को व्यापक प्रसार गर्न यो धेरै मिम्स तिनीहरूलाई को एक उत्पत्ति र: "। जीवन - खरानी" एक र स्पष्ट ढाँचा, अरु जस्तै, त्यो छैनन् र सामान्यतया एक तस्वीर वा फोटो सम्पादक को मद्दत एक धेरै नीरस खैरो रंग दिइएको र उपयुक्त लेबल संलग्न जो एक तस्वीर, जस्तो देखिन्छ। कहिलेकाहीं थपियो र अन्य वस्तुहरु - समस्या बढि जीवन्त विचार।
यसलाई उदाहरणका लागि, परिस्थिति छैन सबै भन्दा राम्रो तरिका, उदाहरणका लागि, परीक्षा आएको, जो व्यक्ति तयार छ, र यति मा हो भने यो प्रश्न "तपाईंलाई कस्तो छ", प्रतिक्रिया पठाउन मजा हुन मानिन्छ, वा बिना प्रयोग गरिन्छ। एन
त्यसैले हामी के खरानी र किन यो शब्द लोकप्रिय आज को युवा बीच भएको छ छलफल।
शैक्षिक ठाउँ भाग रूपमा जानकारी र शैक्षिक वातावरण
"मेरो भविष्य पेशा - डाक्टर": उच्च विद्यालय लागि निबंध
कसरी शब्द स्याउ संग एक वाक्य बनाउन: उदाहरणहरू
को 1 ग्रेड मा आमाबाबुको पेशा बारेमा कथा। शिक्षकहरू लागि सल्लाह
Isomers र homologues कसरी लेख्न? alkanes को isomers कसरी हुन?
Nikolai Gogol द्वारा कविता "मृत प्राण" मा सडक को छवि
समूह Linkin पार्क चेस्टर बेनिंगटन आत्महत्या को Soloist
Velasquez, Werdum - यस वर्षको फाइट
स्वादिष्ट व्यञ्जनहरु: पाक बिना मिठाईहरू
पूर्वी यूरोपीय सादा: जलवायु, प्राकृतिक क्षेत्रहरू, भौगोलिक स्थान
सहयोग - सफलता को बाटो हो
टमाटर स्पेगेटी सस - इटाली को स्वाद।
अपकेंद्र पंप: किसिम, डिजाइन सुविधाहरू र प्रयोग
कम्प्युटर को शक्ति कसरी निर्धारण
बच्चाहरु को लागि ग्लिसन कसरि सुरक्षित छ: समीक्षाहरु
के तपाईं राई रोटी मा माछा संग स्यान्डविच तयार गर्न सक्नुहुन्छ
प्रियजनहरूलाई र घनिष्ठ मित्र लागि - गरे आफ्नो हातमा एक काठ तालिका